Madaxweynaha UKrain oo sheegay in ciidamada Ruushka ay hadda diiradda saareen hawlgalkii ay muddo dheer isku diyaarinayeen. | dayniiile.com
Home WARKII Madaxweynaha UKrain oo sheegay in ciidamada Ruushka ay hadda diiradda saareen hawlgalkii...
Madaxweynaha UKrain oo sheegay in ciidamada Ruushka ay hadda diiradda saareen hawlgalkii ay muddo dheer isku diyaarinayeen.
Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in tiro badan oo ka mid ah ciidamada Ruushka ay hadda diiradda saareen hawlgalkii ay muddo dheer isku diyaarinayeen.
Goor sii horreysay, Golaha Ammaanka Qaranka ee Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay isku dayeen in ay dhulka ku daraan ku dhawaad​​ dhammaan ciidamada jiidaha hore ee gobollada Donetsk, Luhansk iyo Kharkiv.
Weerarkan ayaa ahaa mid la filayey muddo dheer kadib markii Ruushka uu ku guul daraystay inuu qabsado Kyiv.
Ruushka ayaa markii hore u muuqday in uu doonayay in uu qabsado magaalooyinka waaweyn ee Ukraine oo uu afgambiyo dowladda.
Hase yeeshee ka dib markii ay la kulmeen iska caabin adag, saraakiisha difaaca ee Ruushka ayaa sheegay in ujeeddooyinkoodii ugu muhiimsanaa ee “marxaladda koowaad ee hawlgalka” ay “guud ahaan u qabsoomeen” sidaa darteedna ciidamadooda laga soo raray aagagga caasimadda.
Waxay ku dhawaaqeen qorshayaal cusub oo diiradda lagu saarayo duulaanka “xoreynta” gobolka Donbas ee ku hadla afka Ruushka.
Madaxweynaha Ruushka Vladmir Putin ayaa duulaanka ku tilmaamay mid la doonayo in ciidamada looga saaro dalka Ukrain, taasoo Ukraine iyo xulafadeeda ay ku gacan seyreen ayna ku tilmaameen weerar aan markii hore loo meel dayin.
Maalintii isniinta oo dhan, Ruushka waxa uu tiro gantaalo iyo madaafiic ah ku garaacay qaar ka mid ah degaannada bariga, siddeed qof oo rayid ah ayaana lagu dilay magaalada Kreminna ee Luhansk iyo aagga Donetsk.
Toddobo qof ayaa ku dhintay kow iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen afar weerar oo Ruushku ka geystay galbeedka Lviv, magaaladaas oo inta badan laga badbaadiyay weerarradii ka dhacay meelaha kale ee Ukraine.
Guddoomiyaha gobolka Luhansk ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay “mid aad u adag oo ku tilmaamay inay tahay wax cadaabta la mid ah”, iyadoo dagaallo joogto ah laga soo sheegayo magaalooyinka qaar.
Magaalada labaad ee Ukraine ee Kharkiv, guddoomiyaha gobolka ayaa sheegay in daadgureynta dadka rayidka ah ay ka socoto meelaha la filayo in isku dhacyo xooggan ay dhacaan.
Saraakiisha difaaca ee Ruushka ayaa sheegay in ciidamadoodu ay habeenimadii Axadda duqeeyeen boqolaal bartilmaameedyo millatari oo ku yaal Ukraine, oo ay ku jiraan 16 xarumood oo militari oo ku yaal Kharkiv, iyo Donetsk, iyo sidoo kale deked ku taal Mykolayiv oo ku taal koonfurta iyo bariga Ukraine.
Moscow ayaa bishii hore sheegtay inay maamusho 93% Luhansk iyo 54% Donetsk, ayna filayaan in ciidamadeeda ay isku dayaan inay hareereeyaan ciidamada Ukraine ee ku haray gobolka.
Previous articleCristiano Ronaldo iyo xaaskiisa oo shaaciyay geerida wiilkooda
Next articleSarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo lagu qabtay Sh/Hoose
Koox hubeysan oo dilay Taliyihi booliska Magaalada Qardho
Musharax Xasan Cali Kheyre maxoow u qabtay dhalinayarada Soomaliyeed
As bombardment intensifies in Ukraine’s Luhansk, more evacuations are required, according...